Shiinaha Nusqaan Dhegaha Naqshadeynta USB C Bluetooth Dhagaha Dhagaha Dhagxaanta T15 Warshad iyo Warshad | Yong Fang
Nusqaan Dhegaha Naqshadeynta USB C Bluetooth Earbuds wireless wireless wireless T15
Xalka Bluetooth: JL6976 V5.1
Range: ilaa 10M
Awood Li-batari: 3.7V, 35 Mah
Waqtiga hadalka: 2.5H
Waqtiga ciyaarta muusikada: 3H
Waqtiga sugida: 48H
Waqtiga lacag bixinta: 1.5H
magaca hage ： T15
Dhexroorka Gudoomiyaha: ￠ 10mm
SPL: 96 ± 3dB (at 1000Hz)
Awood qiimeyn: 10mW
Jawaabta Joogtada ah: 20Hz-20,000Hz
Qaybta makarafoonka: MEMS 2718
Jawaabta Joogtada ah: 100Hz-10,000Hz
Danab hawlgalka: 2V
sanduuqa xeedho xawilaadda hadda: 300 MA
Li-batari: 3.7 V, 500 Mah
Joogtada taagan: 100uA
Waqtiga lacag bixinta labada dhegood: 4.5 waqti
waqtiga xeedho xeedho: 2H
Xasilloonida ATS Chipset, Nooca5.0】Dhageysiyadan wireless-ka ah ee runta ah waxay ku saleysan yihiin dhamaadka sare ee ATS chipset, ATS 3015, oo lagu soo bandhigayo waxqabad bluetooth deggan iyo daahitaan hoose;
Darawal 10mm, Naqshad Sameynta Dhegaha】Muddada dheer ee ugu dambeysa xirashada raaxada iyo jirdhiska gaarka ah, dhagaha dhagaha ee 'Bluetooth' waxaa loogu talagalay nambarka qaabka dhagta iyo gudaha guryaha waa darawallada 10mm ee xoogga leh.
Ultimate Bass Hufnaan Sare 6mm Neodymium Driver】tayo sare leh 6mm neodymium oo gudaha ah oo si xirfad leh oo si khaldan loo qalabeeyay guryaha acoustic soo saarida cod aad u qoto dheer oo baas weyn leh;
Muuqaalka Latency-ga ugu dambeeya ee qaabka ciyaarta】Waxay taageertaa habka ciyaarta latency-ka ee aadka u hooseeya, marka aan ciyaarno, waxaan arki karnaa, maqli karnaa, dareemi karnaa isla markaana ka fal celin karnaa waxa ka socda ciyaarta si wax ku ool ah. Tani waa sababta waqtigan xaadirka ah, dadka intooda badani ay u isticmaalaan sameecadaha dhegaha leh ee fiilooyinka leh, halkii ay ka isticmaali lahaayeen headphones-ka ciyaaraha wireless-ka, gaar ahaan ciyaartooyda ciyaarta xirfadleyda ah. Iyada oo lagu hagaajinayo habacsanaanta, haddaba, aad iyo aad iyo aad u badan taleefannada dhegaha ee ciyaarta ayaa noqda xulashada ciyaarta loogu jecel yahay;
Fit Jirdhis Gaar ah Iyo Naqshad Dhismeedka Ergonomic】Inta badan earbuds-yada 'tws', dadku waxay ka walwalaan fayoobaanta raaxada iyo inay ka dhacaan dhegaha. Kooxdayada khibradda leh ee R & D waxay sameeyeen falanqeyn faahfaahsan iyo xayiraad iyo marar badan oo tijaabooyin wax ku ool ah si loo hagaajiyo loona xaqiijiyo arrimahan caadiga ah laakiin madax xanuunka. Iyo, jimicsiga gaarka ah, talooyinka dhegaha silikoonku si gaar ah ayaa loogu qaabeeyey qaabkan;
Kiiska USB C Battery Support Taageerida Wireless】Si loo ilaaliyo in si buuxda loo casriyeeyo, fiilada caadiga ah ee korontada ku shaqeysa ee micro 5 pin waxaa lagu beddelay fiilada caanka ah ee C USB Maxaa intaa dheer. Qaabkan waxaa loo qaabeyn karaa taageerada lacag-bixinta wireless-ka ah. Tani waa ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo u shaqeynaya qaabkan. Iyadoo muuqaalkan, kiiska batteriga waxaa lagu soo celin karaa USB cable C ama saxanka lacag la'aanta ah;
Taabashada Xakamaynta iyo IPX 5 Heerarka】Maaddaama taleefanka gacanta ee wireless-ka ah ee runta ah loo isticmaali karo xaalad iyo jawi kala duwan, qaabkani wuxuu dhaafi karaa baaritaanka biyaha ee IPX 5. Marka, marka la sameynayo jimicsiyo isboorti, waxaan ku xiran karnaa taleefanka dhegaha ee tws ee dhageysiga muusikada, wadahadalka taleefanka, ama dhageysiga barnaamijyada wireless-ka;
Access Qalabka Lagu Heli Karo Si Fudud Loo Adeegsado】Badanaa, qalabku wuxuu ka koobnaan doonaa qeybahan, hage deg deg ah, 3 cabir oo talooyin dhegta silikoon ahaaneed loo habeeyay, iyo fiilada korantada ku shaqeysa;
Hore: Qiimaha Tartanka Midabka Isku Darka Wireless-ka Muusikada Dhagaha ee Bluetooth BT-8026
Xiga: Warshad asal ah Tws Dhego-dhego & Dhago-dheg Isboorti Isboorti Dhex-dhexaad ah oo Wanaagsan Xargaha Dhagaha-la'aanta T18
Run-laaweyaal Bluetooth wireless ah oo run ah
Dhageystayaasha dhabta ah ee wireless-ka 2020
Dhagaha Dhagaha ee wireless-ka
Rikoor Dhageystayaal run ah
Dhag Dhag la'aan wireless ah
Dhagaha Earbiyeedka 'Stereo Stereo True'
Raadiyaha dhabta ah ee wireless-ka V5 0
Heerka Gelitaanka Sawaxanka Firfircoon ee Tirtiridda Fiilo Xir ...
Taabo Xakameynta Triple Darawalka Gawaarida Gawaarida Hoose ...
Tartanka Qiimaha Midabku Isku Darso Wireless Bluetooth ...
Warshad asal ah Tws Dhegaha & Dhagaha ...